Iimveliso zokuSebenza ngokuKhanyayo eziKhanyayo eziPheleleyo
Inkcazo yemveliso Idesika yokuKhusela i-Lamp ye-Lamp ye-LED iyinciphisile imitha yokukhanya yamandla aluhlaza ngokugcwalisa iziphene ezibonisa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuluncedo ekunciphiseni i-retina yamehlo okwenzakalayo kunye nokwandisa uxinzelelo. Kwaye umbala ophezulu wokunikezela ngokusebenza (Ra = 97 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) yenza abantu bazive bekhululekile kwaye befumana ngakumbi ebomini. Amanqaku aphambili ● Ukhuseleko kwamehlo ● Ukunikezela ngombala ophezulu ● Ukukhuthaza ukuqonda kunye nokugxila kwiNombolo yeMveliso R ...
3030 Ukukhanya okuphezulu okuKhanyayo okumhlophe okukhokelwayo
Inkcazo yemveliso Lo mthombo wokuKhanya kwe-3030 ye-LED sisixhobo esisebenza ngamandla esisebenza ngombane esinokuphatha ukuqhuba okuphezulu okufudumeleyo kunye nokuqhuba okuphezulu ngoku. Uluhlu lwepakeji encinci kunye nokuqina okuphezulu kuyenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo lokukhanya kwepaneli ye-LED, ukukhanya kwebhalbhu ye-LED, ukukhanya kwetyhubhu ye-LED, ukukhanya kwakhona kunye nokunye i-White Power LED iyafumaneka kuluhlu lobushushu bombala ukusuka kwi-2600K ukuya kwi-7000K. Eli candelo liprinta unyawo oluhambelana nobungakanani be-LED efanayo kwimarike yanamhlanje. Ubungakanani: 3.0 x ...
Itekhnoloji eNtsha ye-IR VCSEL yokuqonda
Inkcazo yemveliso ityhubhu yokukhupha i-infrared (i-IR ye-IR) ikwabizwa ngokuba yi-infrared emitting diode, ekudidi lweedayidi ze-LED. Isixhobo esikhupha ukukhanya esinokuguqula ngokuthe ngqo amandla ombane abe kukukhanya okufuphi ne-infrared (ukukhanya okungabonakaliyo) kwaye kuphume. Isetyenziswa ikakhulu kutshintsho lweefotoelectric, izikrini zokuchukumisa kunye neesekethe zokuhambisa kude. Ubume kunye nomgaqo wombhobho we-infrared emitting tube ufana nalawo aqhelekileyo ekukhanyeni kwediod ...